पशुबलिको विरोधमा थिचिएको गढिमाई - Himalkhabar.com
अन्तर्वार्ता/विचारबुधबार, मंसिर ३, २०७१
पशुबलिको विरोधमा थिचिएको गढिमाई
फेसबुक र ट्विटरमा #गढिमाई र # स्टप एनिमल सेक्रिफाइस भन्ने पोष्टहरूको हल्ला निकै चर्को छ । गढिमाईमा पशुबलि रोक्न नेपाल सरकारलाई अनलाईन आग्रह र इमेल–पत्रहरूको त बाढी नै लागेको छ ।
गढिमाई मेलाले बाराको अती सामान्य गाउँ बरियापुरलाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनाइदिएको छ, जहाँ प्रत्येक पाँच वर्षमा हजारौं पशुहरूको बलि दिइन्छ, देवी कालीलाई खुशी पार्न भन्दै ।
पशु–अधिकारकर्मीले यो बलि परम्पराको प्रतिरक्षामा उत्रनेको उछितो काढेका छन् । ‘युरोप र उत्तरी अमेरिकाका मांसभक्षीहरूका लागि हुने पशु हत्यालाई बेवास्ता गर्दै नेपालमा पशुबलिको विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन’ भन्ने ट्विटपछि मलाई दुत्कार्दै थुप्रै इमेलहरू आए ।
म आफैं पनि मांसहारी हुँ यद्यपी धर्मका नाममा पशुहत्याको समर्थन कहिल्यै गर्दैन । तर, गढिमाई मेलाको विरोध गर्नेहरूले यसलाई ‘बर्बरतापूर्ण’, ‘क्रुर’ र ‘अमानवीय’ भन्नु ठिक होइन । यो मेलालाई संसारकै ‘सबैभन्दा ठूलो’ र ‘अती भयानक’ पशु बलि भनेर बढाइचढाई ब्याख्या गरिएको छ ।
युरोपमा औद्योगिक स्तरका बधशालामा हुने पशु हत्या संभवतः यस्तै भयानक हुन्छ, अमेरिकामा मनाइने थ्याङसगिभिङ (यो उत्सव पनि मंसीरमै परेको छ) का बेला त्यहाँ करोडौं टर्कीको हत्या गरिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सेलेब्रेटीहरूको साथ पाएका शक्तिशाली पशुअधिकारकर्मी र स्थानीय आयोजकबीचको चर्काचर्कीले नेपाल र सीमावर्ती भारतमा गढिमाई मेलाको साँस्कृतिक महत्व भने हराउँदो छ ।
सन् २००९ मा फ्रान्सेली अभिनेत्री ब्रिगिट बार्डोटले यो पर्व विरुद्धको अभियानलाई समर्थन गरिन् । अहिले गढिमाई विरुद्धको अभियानमा बेलायती अभिनेत्री जोआना लुम्ले पनि जोडिएकी छन् ।
मिडियालाई तस्वीर चाहिन्छ, र सयौं मारिएका पशुहरूबाट घेरिएको एक्लो मानिसको नाटकीय जस्तो तस्वीर चर्चामा आउँछ । यस्ता तस्वीरहरू सोसल मिडियामा तुरुन्तै ‘भाइरल’ हुन्छन् ।
पशुअधिकारकर्मीले यस्तो पशुबलि हेर्ने नेपाली बालबालिकाको मनस्थितिमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै दुख व्यक्त गर्छन् । तर, यस्ता तस्वीर त उनीहरू आफैंले इन्टरनेटमा प्रशारण गरिरहेका हुन्छन्, त्यसका बारेमा को बोलिदिने ?
आरामी कुर्सीमा बसेर पशुअधिकारको वकालत गर्ने पश्चिमाहरूका वेबसाईटले ‘रेड अलर्ट’ जारी गर्दै मेलालाई ‘प्रलयको दिन’ जस्तै बनाइदिन्छन् र अभियानका समर्थकहरूलाई उदारतापूर्वक चन्दा दिन पनि आग्रह गर्छन् ।
हिन्दू बहुल नेपालमा पशुबलि विरुद्ध ढ्याङ्ग्रो ठटाइरहँदा बेलायतमा भने विना कुनै हस्तक्षेप मासुका निम्ति पशु हत्या भइरहेको हुन्छ । यस्ता अधिकारकर्मीहरूले केएफसी, म्याक डोनाल्ड्स र बर्गर किंगजस्ता रेष्टुराँका लागि कुखुरा र गाईको मासू आपूर्ति गर्नेविरुद्ध धर्ना गरेको कहिल्यै सुनिंदैन । बरु उनीहरूले अर्को हप्ता अमेरिकामा हुने टर्कीको संहारविरुद्ध अभियान चलाउन सके हुन्थ्यो ।
बौद्ध धर्म बाहेक हिन्दू, इस्लाम र क्रिस्चियन धर्ममा कुनै न कुनै रुपमा पशुबलिको प्रचलन छ । हिन्दू र प्राकृत धर्मका केही विश्वास समूह, पन्थ र सम्प्रदायमा त पशुवली जरुरी मानिन्छ । यहाँ निर मुद्दा के हो भने, यस्तो परम्परामा एकाएक रोक लगाउन सकिंदैन, यसलाई क्रमिक सुधारतर्फ लैजानु उचित हुन्छ ।
गढिमाई क्षेत्रका अधिकांश निर्वाहमूखि किसानहरूका लागि त मासु खान पनि ठूलै उत्सव कुर्नु पर्छ । उनीहरूको आस्था र विश्वासको प्रणालीमा पशु बलि परम्पराको जरा गहिरो छ ।
गरीब नै भए पनि गढिमाई क्षेत्रका किसानहरूमा आकांक्षाहरू छन् । संभवतः उनीहरू आफ्नो कठिन जीवनबाट उद्दारका लागि अलौकिक शक्तिलाई खुशी पार्न खोजिरहेका हुन्छन् ।
केही परम्परालाई गलत भन्दै निन्दा गर्न सजिलो त हुन्छ तर, त्यसलाई गहिराईमा बुझ्न र सदियौं देखिको विश्वासमा परिवर्तन ल्याउन ठूलै प्रयास र धैर्य चाहिन्छ ।
यो पर्वसँग जोडिएका फोहरको ब्यवस्थापन, बढदो व्यवसायीकरण, पशुपंक्षी ब्यापारको बढ्दो बजार (जसबारे पशुबलि विरोधी मञ्चहरूमा छलफल हुँदैन) जस्ता मुद्दाहरूमा पनि चासो दिन जरुरी छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा चन्द्रकिशोर झा लेख्छन्, ‘यो पर्व स्थानीयहरूले सीमा पारीका आफन्त भेट्ने अवसर पनि हो ।’ गढिमाईका पुजारी थारु हुन्, थारु जातिको आफ्नै विशेष परम्परा र संस्कृति छ । झाका अनुसार मेलाका अधिकांश श्रद्धालु हजाम, लोहार, माली, तेली र कुम्हार जस्ता मधेशी समाजका कथित तल्लो जाति अन्तर्गतका हुन्छन् ।
तर, यस्ता सुक्ष्म विषयहरू पशुबलि विरुद्धको आक्रोशमा लुप्त भएका छन् । अभिजात्य अन्तर्राष्ट्रिय अभियानकर्ताका आँखामा भने सार्वजनिक रूपमा हुने पशुबलि मात्रै समस्या भएको छ । त्यसो भए के गढिमाईमा हुने पशुबलि बन्द बधशालामा भए त्यसलाई उचित मान्ने ?
केही ट्विटर पोष्टमा भनिए झैं धर्म, खेल वा खानका लागि हुने पशु हत्याको विरोध गर्ने उच्च नैतिकता शाकाहारीले मात्रै देखाउन सक्छन् ।
अधिकारी स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।
मुल संस्करण अंग्रेजीमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस